एकाएक सम्पर्कविहीन भएका डिएसपी केटीसहित होटलमा भेटिए…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
शुक्रबार , असार ४, २०७८
एकाएक सम्पर्कविहीन भएका डिएसपी केटीसहित होटलमा भेटिए…हेर्नुहोस् ।
मंग्सिर १०, २०७७ बुधबार 2
धनगढी : इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका इन्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) भरतबहादुर चौधरी मंगलबार राति एकाएक सम्पर्कविहीन भए। मंगलबार रातिदेखि सम्पर्क विहीन भएका उनी बुढीतोलाको एक होटेलको कोठामा यु’वती सहित भेटिएको स्रो’तले जनाएको छ ।
राति ९ बजेपछि सम्प’र्कविहीन भएपछि उनको खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरियो। कैलाली प्रहरीमा हलचल म’च्चियो भने प्रहरी अधि’कृतहरु त’नावमा परे। कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतिक विष्टको ने’तृत्वमा चौधरीको खोजीका लागि राति नै टोली खटाइयो भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट समेत छुट्टाछुट्टै टोली प’रिचालन गरियो।
तर, प्रहरी नायव उपरीक्षक चौधरी बुधबार बिहान कैलालीकै बुढीतोलाको एक होटलमा युवतीसँग फे’ला परेका छन्। स्रोतका अनुसार उनी, ‘केटीसहित बिहान बुढीतोलामा रहेको एक होटलमा भेटिएका हुन्। कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतिक विष्टको नेतृ’त्वमा चौधरीको खोजीका लागि राती नै टोली खटाईएको र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट समेत छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको थियो ।
सो टोलीले प्रहरी नायव उपरीक्षक चौधरीलाई आज बिहान बुढीतोलाको एक होटलमा युवतीसँग फे’ला पारेको थियो । स्रोतका अनुसार उनी ‘केटी’ सहित एक होटलमा भेटिए पनि युवती सहित रहेको कुरा भने प्र’हरीले लुकाएको छ । केटी लिएर बुढीतोला जानु भएको रहेछ, डि’स्टर्ब हुन्छ होला भनेर फोन अफ गर्नु भयो होला ।
यता सम्पर्क वि’हीन भएपछि खोजी हुन थाल्यो ।’ स्रो’तले भन्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्र’हरी कार्यालयका प्रवक्ता प्र’हरी वरिष्ठ उपरिक्षक मुकेशकुमार सिहंले नायव उप’रीक्षक चौधरी आज बिहान आफै सम्पर्कमा आएको बताए ।
युवतीसँग भेटिएको कुरामा सत्यता नभएको र थप अनु’सन्धान भईरहेको उनले बताए । प्र’हरी व’रिष्ठ उपरीक्षक सिहंल भने–‘सम्पर्कवि’हीन भएपछि खोजी गरेका हौं ।
उहाँ नेटवर्क नभएको ठाउँमा जानुभएको रहेछ, सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ ।’ उनका अनुसार चौधरीले सूचना संकलन गर्न गएको भनेपनि उनीसँग अन्य प्रहरी अ’धिकृत भने गएका थिएनन् । चौधरीलाई अहिले जिल्ला प्रह’रीका कार्यालय कैलालीमा राखिएको छ ।
Prevवार्तामा आउन तयार छौ,तर वार्ता खुलामञ्चमा हुनुपर्छ, दिल्ली,बेइजिङमा हैन – विप्लव
Nextओलीले कति पेजको उत्तर लेख्छन् त्यो मतलव छैन , प्रचण्डको प्रतिवेदन तलमाथि हुँदैन : माधव नेपाल
सार्वजनिक खर्चमा व्यापक क’टौती, बैठक भत्ता, विदेश भ्रमणदेखि हेलिकप्टरको बिलसम्ममा क’डाई…हेर्नुहोस् ।
नौ महिनापछि खुल्यो पशुपतिनाथ, यस्तो देखियो चहल पहल… हेर्नुहोस्।
तुलसीको सेवनले दिलाउँछ फ्लू र भाइरसबाट छुट्कारा ! यसरी प्रयोग गर्नुहोस् ।(बिधि सहित)
साढे दुई अर्बको अनियमिततामा मुछिए डा.खतिवडा…हेर्नुहोस् ।
आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1500)
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1301)
गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (688)
असार १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र के-के खोल्न पाइन्छ ? (540)
मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (415)
के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (361)
जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए (305)
नायिका करिष्मा भन्छिन्; ‘क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृ’णा गर्यो (241)
बिग्रेका छोरा सुधार्ने जिम्मा बुहारीलाई कहिलेसम्म?
बाढीले प्युठानमा निर्माणाधीन पुल भत्कायो
नायिका आँचल शर्मा र उदित श्रेष्ठ, ५० परिवारका लागि राहत लिएर आज सिन्धुपाल्चोक जाँदै
धान रोप्न गएका किसान बाढीमा फसेपछि रूखमा स्ट्रेचर बाँधेर उद्धार
मौसम खराबका कारण गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपाली मनाङमै अड्किए
१.	आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1500)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1301)
३.	गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (688)
४.	असार १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र के-के खोल्न पाइन्छ ? (540)
५.	मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (415)
६.	के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (361)
७.	जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए (305)
८.	नायिका करिष्मा भन्छिन्; ‘क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृ’णा गर्यो (241)